बिनाअनुमति जी-न्यूज टिमलाई सगरमाथा उडाउने सिम्रिक एयरसँग स्पष्टीकरण सोधिने :: Setopati
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, पुस २९
जी-न्यूजका प्रधान-सम्पादक सुधीर चौधरी।
'कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्‍ज क्षेत्रमा गएर छायांकन गर्दा अनुमति लिनुपर्छ, तोकिएको शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ,' विभागका निमित्त महानिर्देशक हरिभद्र आचार्यले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, 'जी-न्यूजको टिमलाई हामीले त्यस्तो कुनै किसिमको अनुमति दिएका छैनौं।'
'हामीले यसबारे सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्‍ज, यहीँको कार्यालय र अरू सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग सोधपुछ गर्‍यौं। उनीहरूले कतैबाट पनि अनुमति लिएको देखिएन,' उनले भने।
'विदेशीलाई हाम्रो सबै नियम थाहा नहुन सक्छ। यस्तोमा उनीहरूको भ्रमणमा सहयोग गर्ने नेपालीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो घटनामा संलग्न नेपाली पक्षले पनि कतैबाट अनुमति नलिएकाले यसबारे हेलिकप्टर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोध्न लागेका हौं,' उनले भने।
'हामी त्यस्तो अनुमति जाँच गर्दैनौं। यात्रुले हेलिकप्टर चार्टर गर्छन्, हामी शुल्क लिएर उडाउँछौं। कुन यात्रुसँग कस्तो क्यामरा छ, मोबाइल छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। हामीले त्यस्तो गर्ने गरेका पनि छैनौं,' उनले भने।
'यसरी निकुञ्‍जको कानुन पालना नहुने गरी उडान गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी एयरलाइन्स वा विमानस्थल प्रशासनले नलिने प्रणाली राम्रो होइन,' उनले भने, 'भोलि यसैगरी हेलिकप्टरले उड्डयनको सामान्य नियमबाहेक अरू पालना नगर्ने भएपछि के हुन्छ? वन्यजन्तुको तस्करी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?' उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता बजाएको अर्को दिन जी-न्यूजले 'सगरमाथाको नाममा भारतले दावा ठोक्नुपर्ने' भन्दै आफ्नो सामग्री प्रसारण गरेको थियो। ओलीसँग अन्तर्वार्ता लिन काठमाडौं आएका चौधरीले हेलिकप्टरमा सगरमाथा आधारशिविर पुगेको बताएका छन्।
मंगलबार राति प्रसारण भएको कार्यक्रममा उनी भन्छन्, 'त्यहाँ उभिएर हामीले यस (सगरमाथा) को नाम परिवर्तन गर्न अभियान सुरू गरेका छौं।'
'माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ भन्ने अभियान हामी आजबाट सुरू गर्दैछौं। हाम्रो यो यात्रा त्यही अभियानको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो,' उनी भन्छन्, 'संसारलाई सगरमाथाको उचाइ पहिलोचोटि बताउने राधानाथ सिकदरलाई अहिलेसम्म जस दिइएको छैन। अब भारतले आफ्नो यो दावा ठोक्नुपर्छ।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७, ०८:३६:००